Gobolka Hawaii ee ugu xun Mareykanka ee loogu talagalay hoy-xayawaan-ku-habboon
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Gobolka Hawaii ee ugu xun Mareykanka ee loogu talagalay hoy-xayawaan-ku-habboon
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Jabinta Hawaii • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Tirada guryaha u roon xayawaanka la heli karo aad bay u kala duwanaan kartaa meel ilaa meel, taasoo ka dhigaysa in qaybo ka mid ah dalka ay aad ugu heli karaan milkiilayaasha xayawaanka marka loo eego kuwa kale.
Tirada guryaha u roon xayawaanka ayaa si aad ah ugu kala duwan gobol ilaa gobol.
Illinois, Mississippi iyo New York ayaa ah gobolada ugu xayawaanka u roon.
Hawaii, Alaska iyo West Virginia ayaa ah kuwa ugu yar ee xayawaanka saaxiib la ah Mareykanka.
67% qoysaska Mareykanka (ku dhawaad ​​85 milyan oo qoys) ayaa leh xayawaan rabaayad ah, 43 milyan oo gurina waxaa degan kiraystayaal. Marka, maxaa dhacaya haddii aad u baahan tahay inaad la guurto saaxiibkaaga xanaaqsan?
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, khubarada safarka ayaa doonayay inay ogaadaan gobollada, magaalooyinka iyo magaalooyinka leh saamiga ugu badan ee guryaha la heli karo ee la kiraysan karo ee waliba aqbala xayawaanka.
Markaad eegto kontonka qof ee ugu dadka badan US magaalooyinka, khubaradu waxay diiwaangeliyeen saamiga hantida la heli karo ee kiraynta taas oo waliba aqbasha xayawaanka. Intaa waxaa dheer, waxaan ogaanay boqolleyda kirooyinka la heli karo ee gobol kasta oo aqbali doona kiraystaha leh xayawaanka rabaayadda ah, taasoo muujinaysa meelaha ugu fiican dalka ee milkiilayaasha xayawaanku ku noolaan karaan.
Illinois waa gobolka ugu fiican ee milkiilayaasha xayawaanka ee doonaya inay kiraystaan, iyadoo 59.87% guryaha ay aqbalaan xayawaanka. Markaa haddii aad tahay milkiilaha xayawaanka raadinaya inaad u guurto qayb cusub oo dalka ka mid ah, Illinois ayaa kuu noqon karta sharad wanaagsan!
Gobolka labaad ee ugu wanaagsan kireysiga xayawaanka waa Mississippi, oo leh 52.28% oggolaanshaha inay heli karaan milkiilayaasha xayawaanka. Tani waxay Mississippi ka dhigaysaa midda ugu saaxiib-wanaagsan dhammaan gobollada Koonfurta, iyo meel ku habboon milkiilayaasha xayawaanka inay ku noolaadaan.
New York waa gobolka saddexaad ee ugu wanaagsan dalka ee kireysiga saaxiibtinimo leh, iyadoo 47.89% guryaha u oggolaanaya kiraystayaasha inay keenaan xayawaankooda. Boqolleydan sare waxay New York ka dhigaysaa gobolka ugu fiican xeebta Bari si aad ula noolaato xayawaankaaga.
10ka Dawladood ee Ugu Fiican Kirooyinka Saaxiibka ah
Rank State Xayawaanka Saaxiibtinimada Leh Wadarta Lets % Saaxiibtinimada Xayawaanka